कोरोना परीक्षण अब १ सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा, ७ मिनेटमै ! « Nagarik Khabar
कोरोना परीक्षण अब १ सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा, ७ मिनेटमै !
प्रकाशित मिति : 20 August, 2021 10:20 pm
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको विषयमा विभिन्न अनुसन्धान र अध्ययन भइरहेका छन् । पछिल्लाे चरणमा यसको औषधीदेखि परीक्षण र रोकथामका उपयहरूका बारेमा पनि धेरै शोधहरु भएका छन् । अमेरिकाले हालै गरेको एक शोधमा मात्र ७ मिनेटमै कोरोना परीक्षणको शत प्रतिशत नतिजा आउने बताइएको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार पेन्सिलको टुप्पोमा प्रयोग हुने ग्रेफाइडको सहायताले मात्र ६.५ मिनेटमा कोरोना परीक्षण हुने र साे परीक्षण सस्तो र चाँडो नतिजा दिने बताइएकाे छ ।
काेरोनाको नयाँ जाँच विधि विकसित गर्ने अमेरिकाको पेन्सिल्भिनिया युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताले अहिले भइरहेको कोरोना परीक्षण महंगो भएको र स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता पर्ने तर ग्रेफाइटबाट हुने परीक्षणको मूल्य १ सय रुपैयाँभन्दा पनि कम हुने बताएका छन् ।
यो परीक्षणको नाम लीड (लो–कस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल एडभान्स याग्नोस्टिक) टेस्ट राखिएको छ । यस मार्फत हुने परीक्षणका लािग ग्रेफाइडको सुइरोलाई इलेक्ट्रोड जसरी प्रयोग गरिन्छ । यसलाई नाकबाट लिएको नमूनाका साथ राखिन्छ । ग्रेफइड इलेक्ट्रोडलाई केमिकल सिग्नलसँग जोडिन्छ । जाँको समयमा केमिकल सिग्नलले पोजेटिभ र नेगेटिभबारे जानकारी दिन्छ ।
वैज्ञानिकहरुले र्यालको स्याम्पलबाट हुने परीक्षणमा १०० प्रतिशतसम्म सही नतिजा दिने बताएका छन् । त्यसैगरि ग्रेफाइड इलेक्ट्रोडबाट नाकको स्याम्पलको जाँच गर्दा ८८ प्रतिशतसम्म सही नतिजा दिने उनीहरुको भनाई छ ।
पेन्सिल्भिनिया विश्वविद्यालयका असिस्टेन्ट प्रोफेसर सीजर डी ला फ्यूनटले लीड टेस्टको किटका रुपमा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य एकदम कम भएको बताउँछन् । उक्त किटबाट मानिसले घरमा नै आफ्नो परीक्षण गर्न सक्छन् । कोरोनाको यो परीक्षण खास गरेर निम्न र मध्यम आय भएका देशहरुमा प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।